राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् । उक्त विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । विधेयकको प्रावधानले जमिनलाई व्यक्तिको अनुमतिबिना वर्गीकरण गरेको र सरकारले निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको आवाज उठिरहेको छ ।
नेपालले आफ्नो सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय सामयिक चासोका मुद्दामा बहस गर्ने/गराउने गरी ‘सगरमाथा डाइलग’ सुरु गर्ने भएको छ । आगामी मार्चमा गरिने यो संवाद कार्यक्रमका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र अर्थतन्त्र विषयक शीर्षक निर्धारण गरिएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शनिबारबाट ललितपुरमा विज्ञ र मुलुकभरका शिक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रातो बंगला फाउन्डेसनको सहकार्यमा ३ दिने सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टाराईले जिल्लामा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरुको निर्माणलाई जोड दिन आग्रह गरेका छन् । 'यो क्षेत्रको विकासका लागि यहाँका ठूला आयोजनालाई चाँडै सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो', उनले भने, 'जिल्लामा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरुले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध स्थापित गराउँछ ।'
बलिउडको धर्म के ?
भारतमा केही वर्षअघिसम्म बलिउडलाई सबभन्दा सेक्युलर क्षेत्र मानिन्थ्यो  । सन् १९४७ मा बेलायतको अधीनबाट स्वतन्त्र भएर एउटा नयाँ राष्ट्रका रूपमा जमेदेखि नै भारतले आफ्नो राजनीतिक व्यवहारमा धर्मलाई मुख्य स्थान नदिने नीति लिएको थियो ।
सिनेमा हलमा राष्ट्रिय गानको पूर्वअनुभव
सिनेमा हलमा सिनेमा सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान बजाउने र सबै दर्शकलाई त्यसको सम्मानमा उठ्न बाध्य पार्ने पञ्चायतकालमै असफल भइसकेको नीतिलाई अहिले फेरि ब्युँताइने भएको छ  ।
वस्तुको मूल्य बढेको बढ्यै नेतालाई स्याहारजीवनशैली नेताकै बढ्यो हामीलाई के छ र !
शुक्रबार प्रकाशित ‘नाम के, भाषा खोइ’ शीर्षकको लेखमा नित्यानन्द मण्डलले ‘मल्लकालीन काठमाडौं उपत्यकामा मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा थियो’ भनेर लेख्नुभएको छ, तर लेखकले कुनै उदाहरण भने दिनुभएन  ।